ဂိမ်းဆော့ပြီး တိုကျိုတက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းတက်ရအောင်လုပ်ကြမယ်!? အရေးကြီးတဲ့သော့ချက်နည်းဗျူဟာလမ်းညွှန် - JAPO Japanese News
ဟူး 18 Aug 2021, 10:51 မနက်
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ နံပါတ် ၁ တက္ကသိုလ်လို့ဆိုရမယ့် တိုကျိုတက္ကသိုလ်က လတ်တလော ကမ္ဘာ့တက္ကသိုလ်အဆင့်မှာ အဆင့်မြင့်ထဲမပါဝင်ပေမယ့် ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ မပြောင်းမလဲ နံပါတ် ၁ မှာရှိနေဆဲပါ။
လည်ပတ်ဆော့ကစားတာတွေမလုပ်ဘဲ စာကိုပဲဖိလုပ်တဲ့သူတွေပဲ ဒီတက္ကသိုလ်ကို ဝင်ရောက်နိုင်တာလားလို့ဆိုရင် တကယ်တော့ ဒီလိုလူတွေပဲ တိုကျိုတက္ကသိုလ်ကို ဝင်ရောက်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။
ဂိမ်းသာကောင်းကောင်းဆော့နိုင်ရင် အဆင့်တွေ တက်လာမယ်ဆိုတဲ့ အံ့သြစရာနည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်။
ဒီနေ့ခတ် ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် ပဉ္စမလှိုင်းရိုက်ခတ်နေပြီး တော်တော်နဲ့ အပြင်ထွက်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။
ဒါဆို အိမ်ထဲမှာပဲ အေးအေးဆေးဆေး ဂိမ်းဆော့မယ်ဆိုတဲ့ သူတွေ များမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဂိမ်းကစားချင်တဲ့ကလေးနဲ့ စာလေ့လာစေချင်တဲ့မိဘတွေကြောင့် မိသားစုအတွင်းမှာ ပြဿနာလေးတွေ မကြာခဏတက်နေကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စမှာ လူကြီးတွေ တစ်ချက် ငြိမ်ငြိမ်နေပေးပါ။
မိဘတွေသာရှိရင် ကလေးတွေက ဂိမ်းကစားရင်းနဲ့ စာလေ့လာခြင်းရဲ့ အခြေခံစွမ်းရည်ကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်းက အလွန်လွယ်ကူပြီးတော့ နည်းဗျူဟာလမ်းညွှန်ကို ဝယ်ပေးခြင်း ဆိုတာပါပဲ။
ဂိမ်းထဲမှာ အဆင့်မတက်တဲ့အခါ လက်ထဲ နည်းဗျူဟာလမ်းညွှန်ရှိရင် နည်းလမ်းတွေကို ရှာဖွေပြီး ရှေ့ဆက်တိုးနိုင်ပါတယ်။
နည်းလမ်းရှာဖွေပြီး ရှေ့ဆက်တိုးမယ်။ နားမလည်သေးရင် ထပ်ရှာပြီး ရှေ့ဆက်တိုးမယ်။ ဒါတွေကို ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်ရင် ဂိမ်းအဆင့်တွေကို အောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့လည်း လေ့လာဆည်းပူးခြင်းကို “ ရှာဖွေခြင်း” လို့ ဆိုကြပါတယ်။
ကလေးတွေက “ဘာလို့လဲ” စတဲ့မေးခွန်းတွေကို မေးလေ့ရှိကြပါတယ်?
ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းဟာ လေ့လာဆည်းပူးခြင်းရဲ့ အနှစ်သာရဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးက မေးခွန်းမေးတဲ့အချိန်မှာ မိဘတွေက ရုပ်ပုံစာအုပ်နဲ့အတူ အဖြေကို ရှာဖွေပေးပြီး ဖြေကြားပေးတဲ့မိဘသာ အနားမှာရှိမယ်ဆိုရင် ကလေးတွေဟာ “ဘာလို့လဲ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းအသစ်တွေ ထပ်မေးလာမှာဖြစ်ပြီး အဲ့မေးခွန်းတွေရဲ့ အဖြေတစ်ခုချင်းစီကို ကလေးတွေက သိရှိမှတ်သားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုအပြုအမူဟာ ပညာရေးစွမ်းရည်ကိုလည်း တိုးမြင့်စေနိုင်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် အရာအားလုံးကို အွန်လိုင်းကနေ ရှာဖွေနိုင်ပြီ လို့ ဆိုကြသူများလည်း ရှိပါတယ်။ အင်တာနက်မှာ ရှာဖွေနိုင်တယ်ဆိုတာ မှန်ပေမယ့် အလုပ်ရှုပ်လိုက်တာလို့ တွေးပြီး မရှာဖွေကြတဲ့ကလေးတွေလည်း အတော်များများ ရှိပါတယ်။
ရလဒ်အနေနဲ့ မသိတော့ဘူးကွာဆိုပြီး ဂိမ်းကို ရပ်ပစ်တာမျိုးရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဘေးမှာ လမ်းညွှန်စာအုပ်လိုမျိုးသာရှိရင် ဒီတိုင်းကောက်ကိုင်ပြီး ဖတ်ကြည့်မိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ရှာဖွေခြင်းဆိုတဲ့ အလေ့အကျင့်ရသွားပါလိမ့်မယ်။
အတွက်အချက်မြန်တဲ့ကလေးနဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေကို ကောင်းကောင်းမှတ်နိုင်တဲ့ကလေးတွေက ဉာဏ်ကောင်းတယ်ဆိုပြီး လွဲမှားစွာထင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယနေ့ခတ်မှာတော့ ပစ္စည်းကိရိယာအသစ်တွေလည်း ဖွံ့ဖြိုးလာနေတဲ့အတွက် အတွက်အချက်မြန်တာတို့က အဲ့လောက်ထိ အရေးမကြီးတော့ပါဘူး။
ဘယ်ပစ္စည်းကိရိယာကို သုံးပြီး ဘယ်လိုလုပ်ရင် အဖြေရနိုင်မလဲ ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်ကသာ ဉာဏ်ကောင်းတယ်လို့ ဆိုနိုင်တာပါ။
ရှာဖွေခြင်းနဲ့သာဆိုရင် လေ့လာဆည်းပူခြင်းမှာ ပိတ်မိနေတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီလိုမပိတ်မိနေရင် လေ့လာဆည်းပူးခြင်းဟာလည်း ခက်ခဲတဲ့အရာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ရလဒ်အနေနဲ့ ချောမွေ့စွာ လေ့လာဆည်းပူးနိုင်ပြီး အဆင့်တွေလည်း တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဘွဲ့ရပြီးတဲ့နောက် အလုပ်ခွင်ဝင်တဲ့အချိန်ဟာ အဲ့ဒီကလေးရဲ့ ဘဝရဲ့ အရေးအကြီးဆုံးအစမှတ်ပါ။
ပုံမှန်အလုပ်ခွင်တွေမှာ လိုအပ်တဲ့အရာက အတွက်အချက်လျှင်မြန်မှုမဟုတ်ပါဘူး။
အတွက်အချက်မြန်ချင်ရင် ဂဏန်းတွက်စက်ကို သုံးရင် ရပါပြီ။
အလုပ်ခွင်မှာ အရေးအကြီးဆုံးက ရှာဖွေနိုင်မှုစွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။
ရှာဖွေပြီးတဲ့နောက် စဥ်းစားတွေးခေါ်နိုင်မှုစွမ်းရည်ဆိုတာလည်း လိုအပ်ပေမယ့် ရှာဖွေနိုင်မှုစွမ်းရည်မလုံလောက်တဲ့သူက စဥ်းစားတွေးခေါ်ဖို့လည်း အချက်အလက်တွေ မရှိတဲ့အတွက် ပထမဦးဆုံး ရှာဖွေနိုင်မှုစွမ်းရည်က လိုအပ်ပါတယ်။
ဂိမ်းဆော့ချင်တယ်လို့ပြောတဲ့ကလေးရဲ့တောင်းဆိုမှုနဲ့ စာလေ့လာဆည်းပူးစေချင်တယ်ဆိုတဲ့ မိဘရဲ့ တောင်းဆိုမှုက တကယ်တော့ တစ်ထပ်တည်းဖြစ်နေတာပါ။
မိဘနဲ့ ကလေး သင့်သင့်မြတ်မြတ်နဲ့ ဉာဏ်ပညာရှိစွာ အောင်မြင်အောင် လုပ်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲပေါ့ဗျာ။
ပြိုင်ပွဲပေါင်း ၁၁၃ ခုမှာ အနိုင်ရမှုက သုည !!! (အနိုင်မရခြင်းဖြင့်နာမည်ကြီးတဲ့ပြိုင်မြင်း ဟရုအုရရ)
Host လောကက ဆရာတစ်ယောက် ?
AI စက်ရုပ်နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ၊ ချစ်သူတွေဖြစ်ချင်ကြလား ?
အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေက ဘောလုံးကို တစ်ယောက်တည်းဆက်ပြီး သယ်ဆောင်မထားနိုင်ဘူး !!!!
အကျော်အမော် Host တစ်ယောက်ရဲ့ အကိုးအကားက နှလုံးသားမှာပဲ့တင်စေသလား ?
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ကိုရိုနာအပေါ်ဆောင်ရွက်မှုတွေက လုံလောက်ပါရဲ့လား?
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဆယ်လ်ဖီဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်တဲ့ အသက်၉၀အရွယ်အဘွား
သိပ်လှတဲ့ကြွက်သားဒဏ္ဍာရီ !!! အဆီမရှိတဲ့ တစ်ချိန်ကဆူမိုနပန်းသမားဆိုတာ !!!
Tatami ရဲ့အစိမ်းရောင်တွေကို ဘာကြောင့်တက်မနင်းရသလဲ?